LinkedIn Basic Boot Musasa | Martech Zone
China, November 17, 2011 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn ine nhengo dzinopfuura mamirioni 135 pasi rese uye mari yepakati yemhuri yemushandisi weLinkedIn inodarika $ 100,000 pagore Chinhu chekutanga chandinoita ndichidzoka kubva kubhizimusi rwendo kana musangano kusangana avo vese vandinosangana navo muLinkedIn, wongorora yavo profiles, uye uone kuti ndeapi andinofanira kutevera nawo. Muchokwadi, ini handitombogamuchire kutangazve… kana iwe usina yakazara yeLinked profile, ndiyo yekutanga kurova inopesana newe.
LinkedIn ndiyo chirevo chebhiza rakasviba rezvenhau. Isu tese tinoziva kuti iriko, asi vashoma vanoishandisa kuzere kugona kwayo. Uku kukanganisa kukuru, kunyanya kana zvasvika pakushambadzira bhizinesi rako. Iyi LinkedIn yekutanga boot camp kudzidziswa inokupa iwe maturusi anodikanwa kuti ushandise saiti kune rako rese bhizinesi uye rako pachako kushambadzira zvido. Kubva ku Mindflash infographic.
Izvo chete zvakashata zvandinazvo nezveLinkedIn ndezvekuti mhando yemapoka yakadzika zvakanyanya pasi nema spammers uye kuita mari nekukurumidza gurus. Zvakare, hatina kuona chero traction pane LinkedIn kushambadzira. Zvinotaridza kunge inzvimbo-yekumira kune vebhizinesi vanhu. Vanopinda mukati, vanowana zvavanoda, uye vanobuda. Ikoko kunoratidzika kunge kusine chero chinhu chinomanikidza kuchengeta vashanyi ipapo.
Tags: bhizinesi linkedinLinkedInlinkedin networksetup linkedin